COP26: Indasitiri Yekushanya Inoda Kuve Chikamu chemhinduro kune njodzi shanduko yemamiriro ekunze
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Sustainability News » COP26: Indasitiri Yekushanya Inoda Kuve Chikamu chemhinduro kune njodzi shanduko yemamiriro ekunze
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Sustainability News • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Nhaurirano yepaneli pamusoro pekushanya semhinduro yekushanduka kwemamiriro ekunze
Chikwata chavakunda paClimate Change chakaumbwa nhasi: Saudi Arabia, Kenya, Jamaica vanobatana nekukoka vamwe kuCOP26, iyo UN Climate Change Conference.
Tourism yanga iri pachirongwa nhasi pa26th UN Climate chinja musangano (COP26) mukati Glasgow, UK
Gurukota reSaudi rakaisa toni yekushanya kuti ibatanidze masimba ekuchinja kwemamiriro ekunze mukutaura kwake.
Ava vatungamiriri vatatu vekushanya kubva kuKenya, Jamaica, neSaudi Arabia nhasi vamisa toni yepasirese yekufamba nekushanya kwenyika paCOP26 muGlasgow.
Kubatana neMauto kuita Tourism Chikamu cheSolution yaive nhaurirano yakafambiswa neaimbova purezidhendi weMexico Felipe Calderon.
Uyewo pachikwata chaiva Rogier van den Berg, Global Director, World Resources Institute; Rose Mwebara, Mutungamiriri & Musoro weClimate Technology Center & Network, UNEP; Virginia Messina, SVP Advocacy, World Travel & Tourism Council (WTTC); Jeremy Oppenheim, Muvambi & Mukuru Mukuru, Systemic, Nicolas Svenningen, Maneja weGlobal Climate Action, UNFCCC
HE Ahmed Aqeel AlKhateeb akati mumashoko ake:
Vaenzi vanoremekedzwa, Madzimai, nevarume.
Tinokutendai nekubatana nesu pano nhasi kutsigira Sustainable Tourism Global Center.
Kuchinja kwemamiriro ekunze inyaya inonyanya kunetsa yakatarisana nevanhu, ndosaka tiri muno muGlasgow.
Mushure memakore maviri akaoma ekufamba uye kushanya, kufamba kuri kudzoka.
Uye kunyangwe idzi dziri nhau dzakanaka kumabhizinesi ekushanya kwese kwese, isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti kukura kweramangwana kuri kuenderana nepasi redu.
Tsvagiridzo yakaburitswa neNature muna 2018 yakawana kuti kushanya kunopa 8% yepasi rose greenhouse gasi.
Iyo IPCC's 2021 report yakajeka.
Tese tinofanirwa kutora danho rekukurumidzira uye rakasimba, ikozvino, kudzikamisa kukanganisa kwemamiriro ekunze.
Saka chii chingaitwa?
Chibvumirano cheParis chinosimbisa kukosha kwekutsvaga mhinduro dzekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuenzana nekudiwa kwekukura kwehupfumi uye hupfumi hwevanhu.
Tourism pasina mubvunzo iindasitiri yakakosha kuhupfumi hwenyika.
Vanhu vanopfuura mamiriyoni 330 vanovimba nayo kuti vawane chouviri.
Pre-denda, rimwe chete mumabasa mana matsva akagadzirwa chero papi papasi aive mukushanya.
Indasitiri yekushanya, inoenda pasina kutaura, inoda kuve chikamu chemhinduro kune njodzi shanduko yemamiriro ekunze.
Asi, kusvika zvino, kuva chikamu chemhinduro kwave kuri nyore kutaura pane kuita.
Imhaka yekuti indasitiri yekushanya yakakamukana zvakanyanya, yakaoma uye yakasiyana.
Inocheka nepakati pemamwe masekete akawanda.
Anopfuura mamirioni makumi mana emabhizinesi ekushanya - kana makumi masere muzana eindasitiri yese - madiki kana epakati nepakati.
Ivo vamiririri vekufamba, maresitorendi, kana mahotera madiki.
Ivo havana humbozha hwemadhipatimendi akazvipira ekusimudzira
kana bhajeti rekutsvaga nekusimudzira.
Ndoda ivo vanokwanisa kuwana zvikwata zvevanobhadharwa zvakanyanya manejimendi avo vanogona kuvaraira nzira dzavangaite kucheka kabhoni yavo vachiri kuchengetedza yavo yepasi.
Nekuda kweizvozvo, kusvika parizvino, iyo indasitiri - kunyangwe paine vavariro dzakanaka - haisati yakwanisa kuita basa rakazara mukubatsira kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Zvino, pakupedzisira, izvo zvinogona kuchinja.
Muchinda weSaudi Arabia Crown Prince, HRH Mohammed bin Salman akazivisa kusikwa mukati mehumambo hweSustainable Tourism Global Center.
Iyo Center ichaunza pamwechete nyika dzakawanda, mubatanidzwa wevazhinji.
Iyo ichapa yakanakisa-mu-kirasi kutungamira uye hunyanzvi kune iyo chikamu, kuitira kuti tishandure nzira yedu yakabatana yekugadzirisa kusimba.
STGC inonakidza nekuti ichaita senzvimbo yekusangana yevanhu vanobva kubazi rekushanya, hurumende, dzidzo nemasangano ekunze.
Nzvimbo iyo isu tichakwanisa kudzidza kubva kune dzakanakisa pfungwa pamusoro pekuchengetedza uye kugovera ruzivo rwakabatana uye nemaitiro epamusoro, kuitira kuti tikurumidze shanduko yedu pamwe chete kuenda kune net-zero ramangwana.
Uye nekuita izvi chengetedza zvisikwa uye tsigira nharaunda.
Zvakanyanya, zvichatigonesa kuita shanduko idzi panguva imwe chete ichipa mabasa uye nekufambisa kukura nekukurudzira hunyanzvi uye nekuendesa ruzivo, maturusi, uye nzira dzekupa mari.
Ndinotarisira kukurukura nezveCentre nepaneru inoremekedzwa iyi, tichitarisa kuti STGC ichabatsira sei indasitiri yekushanya kuenda kune net-zero emissions, uye kufambisa chiito kuchengetedza zvisikwa nekutsigira nharaunda.